Munaasabad lagu dhisay maamul gobaleed loogu magac daray Banaadir state oo muqdisho kadhacday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Munaasabad lagu dhisay maamul gobaleed loogu magac daray Banaadir state oo muqdisho...
Munaasabad lagu dhisay maamul gobaleed loogu magac daray Banaadir state oo muqdisho kadhacday
Munaasabad ka dhacday maanta magaalada Muqdisho ayaa Maamul la magac baxay Banaadir State waxaa uu ku doortay Madaxweyne, kadib doorasho dhex martay Labo musharax oo isku soo taagay xilka Madaxweynaha.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, iyadoo musharax lagu magacaabo C/llaahi Axmed Maxamed (C/llaahi Dheere) uu sheegay inuu ku guuleystay doorashada, kadib markii uu helay 87 cod, halka musharaxa la tartamayay Axmed Yuusuf Maxamed uu helay lix cod.
“93 Xubnood oo xubnaha Baarlamaanka Banaadir State oo maanta fariisatay ayaa u codeysay 87 xildhibaan C/llaahi Dheere, halak musharaxii kale uu lix cod helay, sidaas darteed doorashada waa ansax”sidaas waxaa yiri Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka la magac baxay banaadir State.
Madaxweynaha la doortay ee Banaadir State C/llaahi Dheere ayaa sheegay inuu dib boorka uga jafi doono maamulkaas, isla markaana uu ku shaqeyn doono rabitaanka shacabka Labada Shabelle iyo banaadir.
“Waxaan rabnaa inaan noqono sida Maamulada Puntland iyo Somalilad oo kale, waxaa ku shaqeyn doonaa rabitaanka shacabka Labada Shabeelle iyo banaadir”ayuu yiri Madaxweynahan la doortay.
Dhinaca kale waxaa uu ka codsaday dowladda Soomaaliya inay 12-saac gudahood ku soo deyso Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Banaadir State iyo wasiirka Arrimaha dibada Cumar Shariif oo maalintii labaad u xiran hey’adaha nabad sugida.
“Waxaa ka codsaneynaa dowladda in 12-saac gudahood ku soo deyso, waana ka xunahay in shuruudo lagu xiro oo la dhaho ka tanaasula waxa wadaan, xataa hadii anaga dhan nala xiro waa sii wadeynaa”ayuu yiri C/llaahi Dheere.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mr Muungaab waxaa uu ka digay in shirar maamul goboleedyo lagu dhisayo in aan lagu qaban karin magaalada, iyadoo maalin ka hor ciidamada nabadsugida ay xabsiga u taxaabeen xubno ka tirsan maamulka la magac baxay Banaadir State.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa soo badanayay Maamulada lagu dhawaaqayay ee lagu dooranayay madaxweynayaasha faraha badan, iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ku jahwareereen maamulada faraha badan ee lagu dhawaaqayo.
Gobolka Shabeelaha Hoose kaliya ayaa waxaa hada ku magacaaban ilaa afar maamul goboleed is magacaabay, sida Maamulka lixda Gobol iyo saddexda Gobol ee Baydhabo looga dhawaaqay oo labadaba u diiwaan gishan yihiin, sidoo kale Maamulka Labada Shabeelle oo iyana Madaxweyne ku doortay agagaarka degmada Afgooye iyo Maamulkan la magac baxay Banaadir State oo maanta Muqdisho ku doortay madaxweyne.
Inkastoo nidaamka Federaalisma uu ku qoran yahay dastuurka ay ku shaqeyso dowladda ayaa waxaa maamul goboleed sameysan kara wax ka badan labo gobol.
Previous articleMombasa: Xiisad ka dhalatay wadaad la dilay
Next articleMagaalada Gaalkacyo oo looga dhawaaqay Urur Ardayda Jaamacadaha Gobalka Mudug ay ku Midaysanyihiin